रानीपोखरीका कङ्क्रिट एक साताभित्र हटाइने « प्रशासन
रानीपोखरीका कङ्क्रिट एक साताभित्र हटाइने
काठमाडौं। रानीपोखरी पुनःनिर्माणका क्रममा यसअघि प्रयोग भएका कङ्क्रिट एक साताभित्र हटाइने भएको छ ।
विगत १० दिनदेखि शुरु गरेको उक्त कार्य अबको एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी पुनःनिर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइसक्ने जानकारी काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको छ ।
भूकम्प जानुअघि जस्तो अवस्थामा रानीपोखरी रहेको थियो सोहीअनुरुप पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गरिने कामपाका इन्जिनियर राम थापाले बताए ।
यसअघि कामपाले जेठ १५ गतेदेखि पुनःनिर्माण शुरु गर्ने भनिए पनि हालसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । वि.सं. २०७२ को भूकम्पबाट रानीपोखरी र पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
प्रताप मल्लले आफ्ना छोरा चक्रबर्तिन्द्र मल्लको नाममा यो पोखरी बनाएका थिए । यो पोखरीको निर्माण कार्य करीब पाँच वर्षभित्र सम्पन्न अर्थात् नेसं ७८९ (वि.सं. १७२५) मा भएको थियो र नेसं ७९० (वि.सं. १७२७/इसं १६७०) मा शिलापत्र राखिएको थियो । जसलाई नेपाल संवत् ८११ इसं १६११) मा न्हुरपुखुर (न्हुपुखु) अर्थात नयाँ पोखरी भनिएको छ ।
रोकिएको काम शुरु गर्न गत चैत २२ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालबीच भएको छलफलले आधुनिक निर्माणको सामग्री हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
अभियानलाई नेतृत्व गरिरहेका आलोकसिद्धि तुलाधर र गणपतिलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहले, काठमाडौंका ४४ भन्दा बढी पर्व र ५१ बढी तीर्थस्थलको गरिमा बचाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
काठमाडौंका पूर्व पानी, कुण्ड, पोखरी, तालतलैयासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । तीमध्येको रानीपोखरी पनि एक हो । पुरातत्व विभागले दोहोरो कुरा ग¥यो, रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई मल्लकालीन शैलीमा बनाउने विषयमा स्थानीयवासी सहमत छन् ।
पुरातत्व विभाग भने राणाकालीन शैलीको कुरा गरिरहेको छ । त्यसैले स्थानीयवासीको भावनाको कदर गर्ने कुरामा महानगरको नेतृत्व गर्ने यहाँले बताए ।
अभियानका अगुवा तुलाधरले भने, “महानगरले गठन गरेको विज्ञ समूहको समितिले मन्दिर मल्लकालीन शैलीमा बनाउन सकिने राय दिइसकेको छ, सोही रायका आधारमा महानगरले निर्णय लिनुपर्छ ।”
यस क्षेत्रका आधुनिक संरचना हटाएर, प्राचीन झल्को दिने स्वरुपमा रुपान्तरण गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत कामपालाई आग्रह गरिएको छ ।